Iziguli eziningi unesithakazelo: ukuthi kungenzeka ukuba sihlanganise ukuthatha imithi ngotshwala nokuthi uyoba yini umphumela kungaba? Umbuzo uwukuthi ezivamile ngempela. Ochwepheshe baxwayisa ngokuthi le nhlanganisela kungabangela iconsi noma ukwenyuka imiphumela oqabulayo izidakamizwa. Ingabe kokubili utshwala "Kagocel" noma kufanele uyeke lokhu "duo"? Zama ukuqonda ikakhulukazi namagciwane ejenti kanye nokwelashwa imithetho ngokuthatha amaphilisi.
"Kagocel": incazelo izidakamizwa
Imithi elwa namagciwane njengamanje ethandwa kakhulu, ikakhulukazi esikhathini izifo mass kwesizini. "Kagocel" libhekisela imithi eminye esebenza ngempumelelo. Yokusetshenziswa, intengo izidakamizwa kanye nokubuyekezwa kwalo bathi lena izidakamizwa engabizi kakhulu ukuqeda izimpawu abuhlungu imikhuhlane.
Njengoba asebenzayo izidakamizwa into esetshenziselwa Kagocel - kwakwakhe kusukela iqembu polyphenol. Nezinsizasenzo kukhona amazambane isitashi, i-calcium stearate, emulsifiers, ne-lactose. Umuthi iza ifomu tablet ukhilimu.
Umuthi namagciwane kuyinto inducer ka interferon futhi has immunomodulatory, elwa namagciwane kanye nemiphumela radioprotective. Izingxenye in the yokwakheka izidakamizwa ezizokhuthaza ukukhiqizwa kwamangqamuzana interferon emzimbeni futhi zinqanda ukukhula nezilwanyana ezincane pathogenic.
Umuthi siyasebenza ngaso Umkhuhlane, herpes simplex uhlobo SARS. Ukuze bagweme ukubanjwa kunconywa ukuthatha esikhathini eliphezulu legciwane acute pathologies ezibangelwa amagciwane. Isenzo we ketshezi esebenzayo siqondiswe kwezici abavikeli engokwemvelo namaprotheni of i umzimba, kungaba lapho sibhekane ngokuphumelelayo cishe kunoma iyiphi uhlobo igciwane. Odokotela batusa kakhulu alidle utshwala "Kagocel" ngesikhathi esifanayo, ukuze singathwesi ezithinta lo mshini wezenzo zomuthi futhi akavumi ukuba nemiphumela engemihle.
A umthamo enkulu utshwala kubathinta kabi umsebenzi ipheshana wokugaya ukudla futhi kungabangela ukuhlanza. Uma ngaphambi kwalokhu ukuthatha imithi, umphumela walo ngeke evelele.
Inani imithi elwa namagciwane Russian ukukhiqizwa - ruble 250-280. Isitatimende olusemthethweni ayiqukethe ulwazi mayelana nokuxhumana esebenzayo utshwala ingxenye. Ngenxa yalesi sizathu, iziguli kaningi zicabanga ukuthi utshwala ngeke kuthinte kusebenta amaphilisi. Nokho, odokotela baxwayisa ngokuthi lokhu akunjalo, futhi kungcono uyeke ukuphuza uphuzo vysokogradusnyh ngesikhatsi ukwelashwa namagciwane ejenti.
Lapho izifo ezibangelwa amagciwane ezinsukwini ezimbili zokuqala kufanele uthathe 2 "Kagocel" amaphilisi kathathu ngosuku. Khona-ke, lo umthamo wansuku zonke is aba nguhhafu. Ngokuhamba Ezinsukwini ezimbili ezilandelayo, kudingeka baphuze ithebhulethi 1 kuphela. Izingane ezivela eminyakeni 3 ubudala umthamo ukhetha onguchwepheshe umuntu ngamunye. Thatha iphilisi can ngaphandle kokubheka ukudla futhi uphuze amanzi amaningi.
Swine Flu Ukwelashwa "Kagocel"
Izidakamizwa "Kagocel" kuyinto ukuthuthukiswa yakamuva abekho embonini yokwenziwa kwemithi yasekhaya. I-ejenti ingasatshenziswa ukuze kwelashwe umkhuhlane, herpes simplex virus, SARS. "Kagocel" Amathebulethi umkhuhlane wezingulube ngeke ayisasebenzi. Isithako asebenzayo ngeke kukhuthaza ukukhiqizwa kwe interferon ayo, okuzokwenza asheshise inqubo yokwelapha.
Ukuze kuvikelwe lo vysokozaraznogo "Kagocel" isifo kufanele uthathe 1 ithebhulethi izikhathi okungenani 2 ngelanga. Ngemva kwezinsuku ezimbili, kufanele bathathe ikhefu futhi, uma kunesidingo, ukuphinda Yiqiniso ezinsukwini 5. Utshwala futhi "Kagocel" azihambisani ekwelapheni pathologies ezibangelwa amagciwane kanye ezithathelwanayo.
Ukulungiselela ngokwayo uma sisetshenziswa kahle angeke kubangele engemihle. Izimpawu ezifana ubuhlungu besisu, isicanucanu, nokungezwani komzimba nezinto ezingajwayelekile kakhulu. Okufanayo imihlola sokugembula okungase kwakheke ngokuhamba seziguli ezithola utshwala. Izazi zithi lokhu kubangelwa emakamu eliphezulu we ketshezi esebenzayo esibindini. Kufanele kukhunjulwe ukuthi lesi sidakamizwa interferon kubathinta kabi the state ngokwengqondo kwe isiguli. Ngakho-ke, njengoba edonsa utshwala ukwephulwa izimpawu ekhona zingavela evelele.
Ukuhlanganisa utshwala "Kagocel" hhayi Kunconywa. Lokhu kuzokwenza kakhulu ukunciphisa nomphumela oqabulayo zomuthi futhi ngeke zikwazi ukunikeza umphumela ezanele abanye leligcikwane. Lokhu kusho ukuthi isimo lesiguli iyovele ibhebhetheke futhi lezi zimpawu ezilandelayo:
kwehle ithoni nomsebenzi.
Uma ungenalo ukukhipha utshwala ngesikhatsi ukwelashwa nge ejenti elwa namagciwane, isiguli isengozini ukuthola iziyaluyalu ezinkulu nakakhulu zezinzwa.
Izidakamizwa analogue ingacosha ngosizo udokotela. Kumele kukhunjulwe ukuthi izindlela kwesakhiwo "Kagocel" asipheli. A nomphumela ofanayo zokwelapha iyona imithi ezilandelayo:
Ngokwe-nokubuyekezwa, "Kagocel" amaphilisi ziyasebenza ngempela uma ayaqala ukuthatha lapho izimpawu zokuqala yesifo. Kumele zithobele esiqokiwe ukwelashwa udokotela lwemithi futhi ukugwema utshwala.
Anaferon omdala. Hlobo luni izidakamizwa?